﻿ ‘कानुनसम्मत बस्नेलाई अमेरिकाले फिर्ता पठाउँदैन’ : बिनोद कुमार तिवारी
गैह्र आवासीय नेपालीहरु (एनआरएनहरु) ले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने र दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरु उपयुक्त वातावरण बनेमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने र थप लगानी जुटाउन सक्ने बताइरहेका छन् । नेपालको विकासमा एनआरएनको भुमिकाका विभिन्न पाटोमा हामीले कुरा गरेका छौं । सञ्जीव वाग्लेले एननआरएन अमेरिकाका विनोदकुमार तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत गरेका छौं :
तपाईको अमेरिकाको बसाई कस्तो छ अहिले ?
नेपालको जस्तो अमेरिका छैन । नेपालमा अमेरिका पाइदैन तर अमेरिकाको बसाई राम्रो छ ।
पछिल्ला समयमा एन आर एनले मुलभूत रुपमा गैह्र आवासीय नेपालीहरु के–के कामहरु गरिरहेको छ ?
गैह्र आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय सन् २००३ मा खुलेको हो । अहिले विश्वको ७८ भन्दा बढी देशहरुमा यो रहेको छ । यसको स्थापना भनेको गैह्र आवासीय नेपालीको हक र हितको लागि हो । यसका साथै यसले गैह्र आवासीय नेपाली र गैह्र आवासीय नेपालीलाई जोड्न पुलको रुपमा खोलिएको संस्था हो ।
एन आर एनमा अहिले संसार भरि कति नेपाली जोडिन पुगेका छन् ?
अमेरिकामा ३ देखि ४ लाख गैह्र आवासीय नेपालीहरु छन् । गत साताको हाम्रो अधिवेसनमा हामीले आधिकारिक रुपमा दुई लाख पचास हजारको आँकडा हामीले निकालेका थियौँ । त्यसमा कतपिय अन डकुमेन्टिङ मान्छेहरु पनि छन् । ७० लाखभन्दा बढी नेपाली विश्वभरमा रहेका छन् । ती सबै गैह्र आवासीय नेपाली संघमा आबद्ध भइसकेका छैनन् ।
अमेरिकाका पछिल्लो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीहरु माथि निकै कडा नीति अख्तियार गरेको र धेरै नेपालीहरुलाई नेपाल फिर्ता पठाइदैछ भन्ने कुरा छ यो अफवा हो या वास्तविकता ?
न त यसलाई अफवाह भन्न सकिन्छ न त वास्तविकता, यो एउटा अमेरिकी सरकारको नीति हो । सायद यो अमेरिकामा भएका डकुमेन्ट विहीन नेपालीहरुको हकमा काम लाग्ला । अमेरिकी सरकारले मागेको डकुमेन्ट भएका गैह्र आवासीय नेपालीलाई त्यस्तो बाधा अड्चन पर्दैन तर डकुमेन्ट नभएकाहरुलाई भने गाह्रो पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीका हक हितका लागि एन आर एन अमेरिकाले एउटा केन्द्रिय हेल्प डेस्क हामीले खडा गरेका छौँ । त्यसमा एउटा निःशुल्क फोन लाइन छ । त्यो फोनमा फोन गरेर कसैले सहयोग माग्नुभयो, कोहि बिरामि भएर पर्नुभयो, कुनै किसिमको समस्या पर्यो भने एन आर एन अमेरिकाले कुन राज्यमा त्यो समस्या परेको हो त्यहाँ हाम्रा सम्बन्धित व्यक्ति गएर सहयोग गर्नुहुनेछ ।
अहिले अमेरिकाले आप्रवासी नेपालीहरु माथि जुन नीति अख्तियार गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ ?
त्यसको विरुद्धमा हामीले केहि माइनोरिटी राख्यौँ र हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडी बढीरहेका छौँ । हामी एकत्रित हुनुपर्छ भन्दै डेलिगेसन जाने गरिरहेका छौं । मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा गयो भने हाम्रो अधिकारको बारेमा पनि बोल्ने मान्छे हुन्छ, त्यसको लागि पनि कोसिस गरिरहेका छौं । हाम्रा समस्याहरुलाई कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ, हाम्रा पिर मार्का र समस्याहरु सुनाइरहेको अवस्था छ ।
त्यसमा केहि सकारात्मक कुरा आउने लक्षण छ ?
त्यो सम्भव छ । अमेरिकाको तोकिएको कानुनले ‘ल्यान्ड अफ द ल’ मा अपराध गरेको छैन र यहाँको कानुनले गर भनेको काम गर्ने र नगर भनेको काम नगरिकन बस्ने आप्रवासिको अवस्थामा त्यस्तो कुनै किसिमको कानुन लागु होला जस्तो लाग्दैन । तर यहाँको कानुन विपरित अपराधमा संलग्न भयो भने विश्वको कुनै पनि कुनामा भएको मान्छेलाई चाहे त्यसले नागरिकता लिएको ७० वर्ष नै किन नहोस्, उसको नागरिकता खोसेर उसलाई पनि फिर्ता पठाइदिएको अवस्था छ । त्यसैले नागरिकता लिएर पनि फौजदारी, आर्थिक अनियमितता कुराहरु जो कोहिले गरेपनि अमेरिकी सरकारले कारबाहि गर्छ ।
जसले विगतमा नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएका छन्, एन आर एनको रुपमा उनीहरुलाई नेपालले पनि नागरिकता दिने दोहोरो नागरिकताको कुरा अहिले के भई रहेको छ ?
हामीले माग्नु पर्ने र नेपाल सरकारलाई सम्झाउनु पर्ने कुराहरु सम्झाइसकेका छौँ र संविधानमा उल्लेख भइसकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा नेपाल सरकारको हातमा छ । यसबाट नेपाल सरकारले गैह्र आवासीय नेपालीहरुबाट नेपालको विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले एउटा ठोस योजना बनाएर विदेशमा बस्ने गैह्र आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकास गर्न बाटो र बिजुली जस्ता योजनामा लगानी भित्राउने अवसर समात्न सक्नुपर्छ ।
तर एन आर एनले जुन रफ्तारमा, जुन भोल्युममा लगानी गर्नुपर्ने थियो, गफ चाहिँ धेरै भयो । काम चाहिँ खासै गर्न सकेन, लगानीको गफ पनि दोहोरो नागरिकता लिनको लागि दिइरहेको हो भनेर पनि तपाईहरुलाई आरोप लगाइरहेका छन् ?
नेपाल सरकारले टुक्रा टुक्रा रुपमा आफ्नो योजना बनाएर विश्वका विभिन्न देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई तपाईहरु लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने हो भने हामी पब्लिक लिमिटेडको रुपमा आएर लगानीको अवधारणालाई अगाडी बढाएर लगानी गर्न तत्पर छौँ । ठोस कार्यक्रम दिनु पर्यो, ठोस योजना दिनु पर्यो र लगानीको सुरक्षालाई ग्यारेन्टि गर्नुपर्यो । सरकारले सपनाको रुपमा नलिई विपनाका रुपमा हाम्रो लगानीलाई महशुस गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गरे हामी लगानी गर्न तयार छौँ ।
गैह्र आवासीय नेपालीहरु, जो नेपालको नागरिकता नै त्यागेर गइसक्नुभएको छ, उहाँहरुलाई नेपालका केही मानिसहरुले के पनि भन्दै छन् भने नेपालको त्यस्तो माया हुन्थ्यो भने नागरिकता नै त्यागेर आउनु । म नेपालको नागरिक नै होइन भनेर कसरी विदेशमा गएर बस्न सक्छन् ?
नेपालको माया भए त नेपालमै बसेर गरिहाल्छन् नि भनेर तपाईहरु प्रति आक्षेप छ । तर यसलाई हामी आक्षेपको रुपमा स्विकार गर्न तयार छैनौँ । यदि हामी नेपालमै बसेको हो भने हामीले के गर्न सक्थ्यौँ ? अहिले बसेको नेपालीहरुले के गर्न सक्नु भयो ? अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालमा नेताहरुले नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भन्दै गर्दा उहाँहरुले कति गर्न सक्नु भयो ? हामीलाई भूपु नेपाली भनिदै गर्दा, यी भूपु नेपाली नहुने नेपालीहरुले कति काम गरिरहनु भएको छ त नेपालमा ? धुलाम्य सडक छ, हिलाम्य सडक छ । बिजुलीको अवस्था छैन, एउटा कुलमान घिसिङले देश भरिमा भएको लोडसेडिङ हटाउनु भएको छ । तर अरु कसले के के गरे त ?
यहि चिज देखेर तपाईहरु पनि नेपाल छोडेर विदेशिनु भएको होइन ?
यहाँ कतिपय मान्छे रहरले आएका छन्, कतिपय मान्छे बाध्यताले पनि आएका छन् । सन् २००६ देखि धेरै नेपालीहरु विदेश आएका अवस्था छ । र यो अवस्था बढ्दो पनि छ । त्यहि अवस्थामा आएपनि हामीले विदेशमा आएर ज्ञान सिप आर्जन गरेका छौँ । हामीले आर्जन गरेको ज्ञान सीप र आर्थिकलाई तैले नेपाली नगरिकता त्यागिस्, तँ अब को होस् ? भन्ने कि हामीले आर्जन गरेको ज्ञान सीप र पैसालाई नेपाल सरकारले लगानीको लागि बोलाउने ? भन्ने दुई वटा प्रश्न छ । जसमा नेपाल सरकार र नेपाली जनता खडा रुपमा उत्रिनुपर्छ । २०७२ सालको महा भुकम्प पछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरेको थियो ।
त्यो सम्मेलनमा एन आर एनको पनि सहभागिता थियो । त्यसपछि तपाईहरुले नेपालमा कति लगानी गर्नु भयो ?
ठ्याक्कै यति गरियो भन्दा पनि नेपाल सरकारले त्यो भन्दा पछाडी एन आर एन ले भनेका कुराहरु के पुरा गर्यो ? नेपालमा भइरहेका कल कारखाना समेत बन्द अवस्थामा छन् भने हामीले मागेको दोहोरो नागरिकता र दोहोरो कर प्रणाली विश्वको आर्थिक उदारीकरण, सिद्धान्तमा दोहोरो कर प्रणाली हुन सक्दैन र यदि दोहोरो कर प्रणाली रहिरहन्छ भने ठुलो रेमिटान्स आउने र लगानी गर्ने कुरा उँदो झर्दै जान्छ । त्यसैले हामी गैह्र आवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्नको लागि आतुर छौँ । तेस्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु आएर गरे भने यहाँको नाफा मुनाफाहरु उनीहरुले नै लैजान्छन् । हामी त्यसो गर्दैनौं ।
भनेपछि एन.आर.एनलाई त्यो दोहोरो कर प्रणाली हटाउने हो र दोहोरो नागरिकताको अधिकार दिइने हो भने एन.आर.एन नेपालमा जति पनि लगानी भित्र्याउन तयार छ ?
हो । अनि तेस्रो कुरा सुविधा र सुरक्षाको पनि कुरा छ । यदि दोहोरो दोहोरो नागरिकता दिने र कर प्रणाली हटाउने तर सुरक्षा हुँदैन भने लगानी कस्ले गर्छ ? त्यसैले नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु प¥यो, लगानीको ग्यारेन्टि दिनुप¥यो । यति भएपछि लगानी गर्नको लागि तयार छौँ । एउटा भनेको पहाडी लोक मार्गको रुपमा विकास गर्ने, यातायातको सुविधा र बिजुलिको विकास गर्ने हो भने पनि नेपालको विकास आफै हुन्छ ।
नेपाल सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउँदै छ, त्यसको लागि एन.आर.एन ले के गरिरहेको छ ?
नेपाल भ्रमण वर्षलाई विश्वमा रहेका सम्पुर्ण एन.आर.एनले सहयोग गर्ने र वर्ष एकपल्ट अरु देश घुम्न जाने भन्दा आफ्नै देश सकिन्छ भने अर्को विदेशि साथीलाई लिएर घुम्न जाने हो भने पर्यटकमा पनि वृद्धि हुन जान्छ । पर्यटकको लागि खाने, बस्ने व्यवस्था र सुरक्षामा नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसैले पर्यटक वर्ष २०२० लाई हर बखत सहयोग गर्नको लागि एन.आर.एन तयार रहेको छ ।
भुकम्पपछिको समय एन आर एनलाई नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको थिायो तर कार्यान्वयन सम्म आइपुग्दा तपाईहरु धेरै हदसम्म हराउनु भएको छ । यसको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
हाम्रो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि कतिपय टेक्निकल कुरा रहेको अवस्था होला त्यसमा मेरो प्रत्यक्ष संग्नता नभएकोले म ठोस उत्तर दिन नसकेपनि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामीले आइ सि सि केन्द्रीय लेभलमा पठाइसकेको अवस्था छ । त्यसमा एउटा छुट्टै समिति गठन भएर काम भइरहेको अवस्था छ । विभिन्न ठाउँमा घर, विद्यालय बनाउन सहयोग गरेका छौं ।
एन आर एनलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउनको लागि र संसारमा छरिएर बसेका नेपालीहरुको हक हितको लागि यो संगठनले के गर्दैछ ?
विदेशमा बस्ने गैह्र आवासीय नेपालीहरुको हक हितको लागि एन आर एनले दीर्घकालिन र तात्कालिन दुई किसिमको मास्टर प्लान बनाएर अगाडी बढिरहेको अवस्था छ ।